Al-Shabaab oo aan lagu martiqaadin shirka London - Sabahionline.com
Al-Shabaab oo aan lagu martiqaadin shirka London Febraayo 21, 2012
Raysal wasaaraha Soomaaliya, Cabdiweli Maxamed Cali ayaa sheegay in aan ururka al-Qaacida ku xiran ee al-Shabaab lagu martiqaadin shirka Khamiista ee London ee looga hadlayo arrimaha Soomaaliya, Idaacadda Kulmiye ayaa Talaadadii (21-ka February) werisay. Qodobbo la xiriira
Kenya: Al-Shabaab oo qabanaysa bannaanbaxyo “khasab” ah
Puntland oo xudduudaha ka xiranaysa al-Shabaab
Cali wuxuu sheegay in al-Shabaab ay ku guul-darraysatay in ay wadahadal gasho markii laga dalbay, sidaa darteedna aan lagala tashan doonin qorshaynta mustaqbalka Soomaaliya. Dhinaca kalena, hoggaamiye sare oo ka mid ah al-Shabaab oo la yiraahdo Sheekh Mukhtaar Robow kuna magic dheer Abuu Mansuur ayaa Talaadadii ku dhawaaqay inay dagaalyahaniintiisu doonayaan in ay kordhiyaan baabuurta laysku qarxiyo iyo weerarrada gaadmada ah, Idaacadda Shabeelle ee Soomaaliya ayaa werisay. Isagoo ka hadlayey xero tababbar oo ay kooxdaasi leedahay oo ku taal Baydhaba oo dhacda koofur-galbeed Soomaaliya ayuu Roobow dagaallo sii kordha ugu gooddiyey dawladda Federaalka KMG ah ee Soomaaliya, AMISOM, iyo weliba ciidamada Kenya iyo kuwa Itoobiya haddii aanay dalka ka bixin. Wuxuu u sheegay malleeyshiyaadka al-Shabaab ee la tababbaray in ay u diyar-garoobaan weerarrada soo socda oo ay ku jiraan weerarro is-qarxinno ah iyo hawlgallo ku-dhifo-oo ka dhaqaaq ah. Al-Shabaab ayaa sheegatay masuuliyadda bam gaari lagu soo xiray oo Jimcihii hore ku qaraxday saldhig bilays oo Muqdishu ku yaal. Ma jeclaysatay maqaalkan?
Dagaalyahannada kooxda alshabaab waa inaan loo ogolaanin inay aduunkan maalin dheeraad ah sii joogaan. Imisa dad ah oo aan waxba galabsan ayay tahay inay u dhintaan fikirkooda ay wadaan? Fikirkoodu waa mid wakhti hore laga tagay, oo xitaa iyagu waa dad maskaxdoodu hab lasoo dhaafay u fikirto. Markaa miyaa la waayay cid u sheegta in dunidu ay marayso qarnigii 21aad? Munaafiqiintani cadaabta ha kasoo cabaan. Ilaahay waxaan ka baryayaa in jidhkooda iyo arwaaxdooduba ay ku gubtaan cadaab daa’in ah oo ay ku waaraan. Hambalyo dhamaan ciidamada dalka soomaaliyeed ee qurxoon xoraynaaya. Waxan u sheegayaa dhamaan walaaleheena soomaaliyeed, anagu waanu idin garab taagannahay. Waxaanan leeyahay adkaysta oo dalkiina ka daafaca munaafiqiintan sharwalayaasha ah. Waxa is waydiin leh, dadkani horta ma yihiin qaar wax bartay, sababtoo ah xitaa qofka ugu jaahilnimada badani waligii kuma biiri karo kooxdan iyo fikirkeeda, kaasoo ah mid qarniyo hore laga tagay. Ceeb ayaa u sugnaatay kooxahan. Waxaa ilaahay ka baryayaa in maalinta 20ka bisha ogost ay noqoto maalin wax kastoo ay dadka soomaaliyeed u riyaaqayeen uu rumoobo. Dadka soomaaliyeed waxay u riyaaqayaan inay helaan dal nabad ah oo ay si raaxo leh ugu noolyihiin rag iyo dumar iyo carruur iyo curyaan intuba. Waxay rabaan dal aan hubka cidna loo ogolaan inay gadato, oo aysan dhagahoodu maqlin dhawaqa bambaanooyinnka mar labaad. Waxay dadku kaloo rabaan dal cuntadu badani taalo, oo tacliintuna qiime iyo qaayo ku leedahay dhexdiisa. Waxaan leeyahay soomaaliya ha noolaato, ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu dhamaantiin idin gaadhsiiyo himilooyinkiina. Ilaahay ha barakeeyo soomaaliya, oo kooxda alshabaabna ha burburiyo.